Nei Bogota inova Guta reInternational Nightlife munaNovember?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Nei Bogota inova Guta reInternational Nightlife munaNovember?
Nhau Nhau • Kuputsa Spain Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Colombia Breaking News • Culinary • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Guta reBogotá muColombia richagashira iyo 5thInternational Nightlife Congress uye 4th Golden Moon Awards munaNovember 14 pamwe neColombia ExpoBar Fair.
Guta reBogotá muColombia rinotambira iyo 5thInternational Nightlife Congress uye ivo 4th Goridhe Mwedzi Mipiro munaNovember 14th pamwe neColombia ExpoBar Fair. Vhiki rapfuura muIbiza, Mutungamiri weInternational Nightlife Association (INA), José Luis Benítezand Mutungamiri weNightlife Association yeColombia (ASOBARES), Camilo Ospina akabvuma kubatana. Sezvaungave iwe uchiziva, iyo INA inobata wepagore wepasi rose kongiresi nemubairo mhemberero uye yakafunga kupemberera gore rino edition pamwe pamwe ne5th chinyorwa cheEexpoBar Fair. ExpoBar ndiyo inonyanya kukosha chiitiko cheColombia panguva yehusiku ine vanopfuura 3.000 vanopinda kusanganisira vamiririri veindasitiri, vashandi, zviremera nevatsigiri.
Mumusangano wataurwa pamusoro apa pakati pevamiriri vaviri, kupinda kweASOBARES Colombia (Colombian Nightlife Association) kuInternational Nightlife Association kwakatenderanwawo, kusimbisa mubatanidzwa wenyika dzepasi rose. Parizvino, iyo INA ine mumiriri wepasirese munyika sere (United States, Spain, France, Italy, Belgium, United Arab Emirates, Mexico neColombia) uye nekuuya kuri kuisirwa Japan neIndia, ichiwedzera zvinopfuura 8 zvivakwa. Pachinzvimbo cheInternational Nightlife Association, tinoda kugamuchira ASOBARES Colombia senhengo itsva inoshanda uye tinokutendai nekuda kwekuda kwenyu uye kugamuchira vaeni mukutendera INA kupemberera pamwe chete zviitiko zvedu zvepasirese kuFare yegore.
The 5th International Nightlife Congress ichatarisana nenyaya dzakakosha senge kuchengetedzeka, kusvibiswa kweruzha, kushanya kwemimhanzi, mhando uye kugona, vese nevatauri vane mukurumbira pasi rese, vari ivo zvakare vashanyi veExpobar, mutungamiriri wezviitiko zvese. Nyaya huru yeInternational Congress ichave iri "Triple Kunaka muHusiku Hupenyu", hutatu hutatu hunosiyiwa hunopihwa neINA kune idzo nzvimbo & makirabhu anosangana zvakateedzana zvinodiwa maererano nekuchengetedza, acoustics uye mhando yebasa mushure mekunyatso kuongorora . Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti Bogotá, inomiririra capital yechiitiko chedu chinotevera, yakaburitsa iyo "Sello Seguro", yakajairwa kuruzhinji chiziviso chakapihwa neGuta kwenzvimbo dzinosangana nezvinodiwa zvakamisikidzwa uye ichave yekukakavadzana muInternational Congress yedu.
Panguva yemanheru aNovember 14th , iyo International Nightlife Associationwill ichaburitsa runyorwa rwe "World's 100 Best Clubs 2018" ichiteverwa neyakavanzika chiitiko kuvharwa kweExpobar inogarwa neASOBARES nevakuru vezvekushanya veBogotá. Guta guru reColombia richava musimboti weindasitiri yehusiku nekufumura zviri pamutemo rondedzero yemakirabhu ehusiku akakosha kwazvo pasirese, kusanganisira "World's Best Club 2018", chinzvimbo chiripo parizvino chakaitwa naUshuaïa Ibiza. Kubva nhasi, sevamiriri vanopinda mune ino mukurumbira runyorwa pane huwandu hwe195 makirabhu anobva ku33 nyika dzakasiyana. Kusarudzwa parizvino kwakavhurwa kusvika Nyamavhuvhu 30. Kwechinguva, United States ine makirabhu makumi matatu nemana ekutsvaga mazita, Spain 34, Italy 26, UK 15 neBrazil nevanhu vanomwe. Idzi ndidzo nyika idzo parizvino dzinounza vakwikwidzi vazhinji pamwechete mumatunhu avo kuzotora mubairo weGolden Moon Mubairo we "Nyika Yakanakisa Kirabhu". Idzi 195 nzvimbo dzinosarudzwa kufambidzana kubva kunyika dzakasiyana seArab, Singapore, Sweden, Czech Republic, Russia, Malta, Japan, Argentina, uye ichangopfuura Colombia pakati pevamwe.
Nzira yekuvhota yeiyo runyorwa yakaumbwa ne 70% yevhoti kubva kumatare edzimhosva (Inoumbwa neboka revanyanzvi rakabatana nenyika yehusiku husiku uye mamaneja ezvinwiwa zvigadzirwa, vatungamiriri vanobva pasirese rekushanya nenhengo dzeiyo Association) nepo 30% ichizivikanwa kuburikidza nesocial network ichatanga kuvhota musi waGunyana 14th, vhoti icharamba yakavhurwa kusvika Mbudzi 4, ndiko kuti, kusvika mazuva gumi pamberi pechiitiko muBogotá, Colombia.
Rondedzero iri mune ino ine mukurumbira runyorwa ine kuwedzerwa kwemimhanzi zvirongwa zveiyo nzvimbo mukati megore, akawanda maficha sehuwandu hwevatengi, matanho ekuchengetedza, masevhisi eVIP anopiwa, online kubhuka, mashandiro akanaka maitiro, akagashira kucherechedzwa, acoustic mhando uye kuzvipira kuUnited marudzi zvinangwa sekuremekedza nharaunda, kuenzana kwevanhukadzi uye mamiriro ekushanda.
Sekureva kwaJoaquim Boadas de Quintana, Secretary General weInternational Nightlife Association, “… Kubudikidza nechiitiko ichi, tinoda kusimudzira uye kukurudzira nzvimbo dzehusiku kubva kumativi ese epasi kukwikwidzana uye kuwana chinzvimbo mune ino mukurumbira runyorwa uye pamwe kutotungamira, kuisa mari mukugona muzvinhu zvese, zvivakwa, masevhisi uye chengetedzo. matanho anovaita kuti vakwikwidzane, vakwezve uye vachengeteke, izvo zvinozokonzeresa kubhenefiti kune vashandisi uye zvichavandudza mukurumbira uye mukurumbira webato, chinova ndicho chinangwa chedu chikuru ".
Iko Delta Uyezve yakasiyana neiyo Delta Variant ye ...
Chii chitsva muBahamas muna Chikunguru
UNICEF Kupa African Union Nemakumi maviri emamiriyoni emadhora ...
VaBahamas vanopemberera kutanga kweCrystal Cruises '...
Nordwind Airlines Inotangazve Yakananga Kubhururuka Kubva kuSt ...
Mushonga weRussia Sputnik V COVID-19 unobvumidzwa ...